Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie Zilungiselela Ukuqhuma Kokukhishwa - Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie
Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie Zilungiselela Ukwanda Kokukhishwa
by Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie | Oct 8, 2021 | Izindaba Zamuva Nezindatshana, Ukukhangisa
I-Illinois Eviction Moratorium iphele ngeSonto, ngo-Okthoba 3, 2021. IPrairie State Legal Services isivele isibona inani lamacala okususwa kwabantu landa. Ngokuya nge-Office of the US Attorney General, lezi zinombolo kulindeleke ukuthi “zande ngokuphindwe kabili ukwenyuka kwamazinga azo ebhadane.” I-Pre-COVID, uPeoria ubevele enezinga eliphakeme kakhulu lokukhishwa kwabantu ezweni.
Ukuthola ubulungiswa ngokulingana kungakhathalekile ukuthi umuntu unayiphi imvelaphi noma izinga leholo kungenye yezinjongo eziphakeme zomsebenzi wezomthetho. Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie zilungiselelwe futhi zikulungele ukusebenzela umphakathi wethu ngesikhathi sokuxoshwa kwabantu ukuze kuqinisekiswe ukutholakala kwezobulungiswa ngokulingana.
IPrairie State igxile emizamweni yayo yonke ngesikhathi kusamiswa ukufundisa umphakathi, ibambisene nezinhlangano eziningi ezinikeza usizo, nokusiza abaqashi nabaninikhaya ukuba baxhumane nalolo sizo. Izinsizakusebenza zisatholakala kubo bobabili abaninikhaya nabaqashi. Indlela ephumelela kunazo zonke kubantu emphakathini wasePeoria yokuxhumana nosizo olufanele izidingo zabo ngokubiza u-2-1-1 (309-999-4029) noma ngokuvakashela www. 211hoi.org.
Njengamanje, kunohlelo losizo oluqhamuka enkantolo oluzokhokha kuze kufike ezinyangeni eziyi-15 zokuqasha. Lesi isicelo esihlanganyelwe, esiqalwe ngumqashi saphothulwa ngumnikazi wendawo. Imininingwane engaphezulu ingatholakala ku- lrpp.ihda.org noma ngokubiza i-866-454-3571.
Usizo lwabaqashi luyatholakala futhi ezinhlanganweni eziningana zendawo ezifana ne-Phoenix CDS, Salvation Army, i-PCCEO, iSt Vincent de Paul phakathi kwezinye ezinosizo lokusiza ukuvimbela ukukhishwa kwabantu, kodwa futhi nosizo kubantu asebevele bakhishiwe. Uhlelo lwe-Help Illinois Families statewide lwenza kube lula futhi kusheshe kubantu ukuqala inqubo yokufaka isicelo sosizo olukhethiwe. Imininingwane engaphezulu iyatholakala ku- www.helpillinoisfamilies.com. Okokugcina, iPrairie State inikela ngezinsizakusebenza ezinjengeNcwadi Yabaqashi Yamahhala kanye neThuluzi Lokukhishwa kuwebhusayithi yethu, www.lolwichi.org.
Kwabanikazi bezindlu nabanini bezindlu, kuzoba nemali ebonakalayo ezotholakala ukuvimbela ukulahleka kwezindlu ngenxa yemali elahlekile. Imininingwane ngalolu hlelo oluzayo izotholakala ku-www.ihda.org/haf. Ngokwengeziwe, imali ebanjwayo eningi inezinketho ezahlukahlukene zokusiza, kufaka phakathi ezinye izinhlelo zokuhlengahlengiswa nezinhlelo zokubekezela. Ukuze ufunde kabanzi, abanikazi bezindlu nabaninikhaya bangavakasha www.consumerfinance.gov/coronavirus/mortgage-and-housing-assistance.
Ukuthola izeluleko maqondana nokususwa, abanikazi bezindlu nabaqashi bangaxhumana ne-Eviction Help Illinois ngokushayela u-855-631-0811, bathumele umlayezo othi “Usizo Lokuxoshwa” ku-1-844-938-4280, noma bavakashele www.tokzsinkht. Usizo Lokuxoshwa e-Illinois lunganikela ngosizo lwezomthetho lwamahhala, izinsizakalo zokulamula, kanye nokuxhumeka kolunye usizo. IPrairie State ingumlingani osebenzayo kulolu hlelo futhi abaqashi bendawo yasePeoria kungenzeka badluliselwe ehhovisi lethu ukuze bathole usizo lwezomthetho.
Kubanikezeli bezinsizakalo, iPrairie State iyaqhubeka nokuhlinzeka ngenqubo yokudlulisela phambili ukuze ihlolisise ngokushesha ukufaneleka nokuxhuma amaklayenti akho nommeli wezezindlu. Sitholakala kalula ukuxoxa ngokuthi izinhlangano zethu zingasebenzisana kanjani ukufeza izinhloso ezifanayo futhi zinikeze ukuqeqeshwa kubasebenzi bakho ezindabeni zezindlu ezifana nokuxoshwa, ukuhlala ngokulingana, noma ukuhlala.
Kwabameli, iPrairie State isungule uhlelo oluqinile lwe-pro bono ukubhekana ngqo nalokhu kuqhuma kwabantu. Uma ungummeli futhi ungathanda ukuvolontiya, sicela ucabangele ukujoyina le phrojekthi. Yenzelwe ukulingana uhlelo lwakho futhi ifaka ukweluleka amaklayenti ngocingo. IPrairie State ihlinzeka ngoqeqesho futhi inikeze nokusabalala ngokungahambisi ngendlela.
Igatsha lasePeoria lasePrairie State landise iProject Court Clinic Project yalo ukuthi ifake abameli ababili kuzo zonke izingcingo zenkantolo zokukhishwa kwabantu ePeoria County naseTazewell County. Seluleka abaqashi ngamalungelo abo, izibopho zabo, kanye nezinketho zabo enkantolo yokuxoshwa ngokwabantu abafika kuqala futhi kunganikeza nezethulo. Abantu bangafaka izicelo zezinsizakalo zomthetho ngaphambi kwesikhathi ngokushayela u-309-674-9831, ngoMsombuluko kuze kube uLwesine, ngo-9 ekuseni kuya ku-1 ntambama noma ku-inthanethi ku www.lolwichi.org.
 Abezindaba, UMerrick B. Garland, Ummeli Jikelele (Agasti 30, 2021), https://www.justice.gov/ag/page/file/1428626/download
 Izikhundla Zokuxoshwa, I-Eviction Lab, https://evictionlab.org/rankings/ (ivakashelwe okokugcina ngo-Okthoba 8, 2021)
Sihlalo Womsebenzi Wezezindlu
I-Prairie State Legal Services, Inc.
Sizwe izolo kwaba #zipcodeday. Sikuphathele. Nakhu lapho ungathola khona i-Prairie State Legal Services enyakatho namaphakathi ne-Illinois. Sicabange ukuthi sizokukhumbuza ukuthi ungathintana kanjani nehhovisi ngekhodi yakho ye-zip uma ufuna usizo. Shayela ku-800-892-2985 noma vakashela bit.ly/3Nu2wdq.	... Buka OkuningiBheka okuncane
Ifomu Lenqubo Yezikhalazo